Published May 28, 2020 at 4:19 PM CDT
Waxaa jira shan dhimasho oo dheeri ah oo ka jirta aagga metro ee Sioux City, sedex ka mid ah Woodbury County labo ka badan oo ka tirsan Dakota County oo ah 56 qof.
Guud ahaan gobolka Iowa, waxaa ku dhinta 495 dhimasho iyo in kabadan 18,300 xaaladood oo wanaagsan ilaa galabnimadii Arbacada.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa ka warbixiyay afar dhimasho oo cusub oo ka timid COVID-19, iyo 57 xaaladood oo cusub.
Dhimashada cusub ayaa ka dhigeysa wadarta guud ee South Dakota 54. Xaaladaha gobolka ee kiisaska la xaqiijiyay ayaa gaaraya in kabadan 4,700.
Hard Rock Hotel iyo Casino waxay qorsheynayaan inay dib u furaan Talaadada, Juun 2 markay tahay 9 a.m.
War saxaafadeed maanta la soo diray khamaarka ayaa sheegaya inuu qorsheynayo inuu qabanqaabiyo furitaanka furitaanno ciyaaraha miiska, valet iyo furitaanka buugga mar dambe.
Sidoo kale, saacadaha shaqada ayaa lagu gaabin doonaa 7 a.m. to 3 a.m. Inta lagu jiro usbuuca iyo 24ka saacadood ee usbuuca dhammaadka iyo xulashada ciidaha.
Waxaa jiri doona baaris heerkul ah kahor intaan qofna soo galin khamaarka iyo fayadhowrka joogtada ah. Shaqaalaha la shaqeeya dadweynaha ayaa xiran doona waji-xidhka iyadoo martida lagu dhiirigelinayo inay xirtaan maaskaro.
Iyo, Komishanka Ciyaaraha iyo Xadiiqooyinka Nebraska ayaa kordhiyay xiritaanka hoyga, hoyga iyo howlaha kooxda ilaa Juun 15-keeda. Maamulayaasha ayaa sheegaya inay rabaan inay hubiyaan in kirooyinka ay ammaan u yihiin booqdayaasha iyo shaqaalaha. Goobaha ciyaarta iyo aagagga wax lagu qoro ayaa xiran illaa ogeysiis dheeraad ah.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaHard RockTyson FoodsnewsDakota CountyCOVID-19SomaliBuena Vista County
Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo weriyeen laba dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday Gobolka
Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo weriyeen laba dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday Gobolka Woodbury Talaadadii sababo la xiriira dhibaatooyinka…
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa fududeynaya xannibaadaha ka jira gobolka Iowa
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa fududeynaya xannibaadaha ka jira gobolka Iowa. Laga bilaabo Jimcaha, tiyaatarada filimada, matxafyada, xeryaha…
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey mid ka mid ah 24-kii saac ee ugu dhimashada badneyd intii lagu jiray faafitaanka COVID-19 iyadoo…
Shirkeeda maalinlaha ah ee maalinlaha ah, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay
Shirkeeda maalinlaha ah ee maalinlaha ah, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay fududeynta xayiraado dheeri ah oo la dhigay si loo…